Alaabada Daryeelka Shakhsiyeed | Ragga Stylish
Daryeelka maqaarka, timaha, gacmaha iyo guud ahaan jirka, waa ka muhiimsan yahay, bil kasta ha noqotee, laakiin hadda oo aan ku dhow nahay xagaaga, maxaa ka wanaagsan in wax yar laga qabto daryeelka maqaarka, timaha iyo wax walba taasi waxay la xiriirtaa quruxda labka, taasi waa sababta aan kuu tusayno qaar ka mid ah kuwa ugu fiican alaabta daryeelka shakhsi ahaaneed.
Marka, ka faallo in dhowr sano hadda laga joogo in ragga ay muujiyeen xiise badan oo ay u qabaan quruxdooda jidheed, iyagoo aad u daryeelaya maqaarkooda, timahooda iyo wax kasta oo kale. waxay ku xiran tahay qaabeyntaTaasi waa sababta ay hadda ugu badan tahay in la arko sida noocyada had iyo jeer bilaabay alaabada dumarka hadda ay sidoo kale u sameeyaan alaabada ragga, sida Vichy, oo leh Dercos Aminexil Energy, si looga fogaado loona ilaaliyo timo luminta, ku habboon ragga u dhexeeya 20 iyo 35 jir.
Si la mid ah, waa in la ogaadaa in mid kale oo ka mid ah waxyaabaha ugu fiican ee kareemka iyo saabuunta ay yihiin wajiga 'L'Bel Homme', maqaarka yar yar ee u janjeera inuu si fudud u qalalo, sidoo kale baabi'inta astaamaha daalka iyo qoyaanka maqaarka wajiga si kaamil ah.
Dhanka kale, waa in la sheegaa in xarumaha ugu wanaagsan ee quruxda labka ah, waxaad heli doontaa ikhtiyaarka aad ku iibsaneyso wax soo saar weyn sida Aquapower Absolute Saliid, oo leh nudaha iftiinka, nuugista degdegga ah iyo inaad maalin kasta u isticmaali karto si aad u hesho maqaar weyn oo dib loo cusbooneysiiyey.
Sidoo kale, waa inaad ogaataa in raggaas oo dhan oo leh mugdi madow, ay hadda iska illoobi karaan iyaga, maadaama Dior Homme Dermo anti daal Eye Serum, pwaxaad awoodi doontaa inaad ku baabi'iso toddobaadyo yar gudahood, oo leh aragti aad u qoto dheer, dhexgal iyo muuqaal dhalinyaro ah. Sidaa darteed daryeel shakhsiyeed oo wanaagsan, ha ka waaban inaad ku haysato alaabtan musqushaada.
Xigasho - quruxda webka
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » La xiiray » Alaabta daryeelka shakhsi ahaaneed
Calanka Waddanka Lacoste